Qatar oo kala baxaysa ciidamadeeda xadka u dhaxeeya Jabuuti iyo Eriteeriya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldQatar oo kala baxaysa ciidamadeeda xadka u dhaxeeya Jabuuti iyo Eriteeriya
June 14, 2017 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Wasiirka Arrimaha Dibada Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani. [Sawirka: Archive]
Doha-(Puntland Mirror) Qatar ayaa kala baxaysa ciidamadeeda xadka u dhaxeeya Jabuuti iyo Eriteeriya, halkaas oo ay dhexdhexaadin ahaan ugu joogtay muranka xadka ee ka dhaxeeya labadaas dal, sida ay sheegtay Wasaaradda Arrimaha Dibada ee Qatar maanta oo Arbaco ah.
Ma aysan sheegin sababta keentay bixitaanka balse tilaabada ayaa imaanaysa iyada oo Qatar ay wajahayso dhibaato diblomaasiyadeed oo kaga timid dowladaha Khaliijka ee ay dariska yihiin, kuwaaso oo xiriirka u jaray asbuuc kahor, iyaga oo ku eedeeyay in Qatar ay taageerto maleeshiyaadka argagixisada ah iyo Iran, balse Qatar ayaa si xoogan u beenisay eedahaas.
Lama yaqaan inta ay yihiin tirada ciidamada ee Qatar ka joogay xadka u dhaxeeya Jabuuti iyo Eriteeriya.
Qatar ayaa ku wargelisay dowladda Jabuuti la bixitaanka ciidamadeeda, sida ay sheegtay Wasaaradda Arrimaha Dibada Qatar.
Dalka yar ee kuyaala Geeska Afrika ee Jabuuti ayaa kamid ah dalal taageeray xulufada Sucuudiga oo hoos u dhigay xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhaxeeya dalka Qatar.
August 24, 2017 Qatar oo sheegtay in ay soo celin doonto safiirkeedii u fadhiyay Iran
July 17, 2017 Imaaraatka Carabta oo ka dambeeyay jabsashadii xogta kumbuyuutarada wakaalada wararka Qatar
At least eight people killed after Al-Shabab attack hotel in Mogadishu
Muqdisho(Puntland Mirror) Kooxda hubaysan ee Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday afgooye, oo ah magaalo beereed dhanka waqooyi-galbeed 30km uga beegan caasimada Soomaaliya ee Muqdisho, dadka deegaanka ayaa sheegay. Sida ay sheegeen dadka deegaanka, weerarka ayaa [...]